Tag: zvemagariro | Martech Zone
Tanga: social media
Zvidzidzo Zvakadzidziswa: Yemagariro Midhiya Mapuratifomu uye Blockchain Mass Kugamuchirwa
Chipiri, May 25, 2021 Chipiri, May 25, 2021 Abhishek Bakshi
Kutanga kwe blockchain semhinduro yekuchengetedza data shanduko inogamuchirwa. Zvikuru kunyanya izvozvi, seyemagariro midhiya mapuratifomu akawedzera huwandu hwavo hwakawanda hwekushungurudza zvakavanzika zvevanhu nguva dzose. Ichokwadi. Icho chokwadi chakakwevera kuchema kukuru kuruzhinji mumakore mashoma apfuura. Inguva yegore rapfuura pachayo, Facebook yakauya pasi pemoto unorema nekuda kwekushandisa zvisirizvo data revanhu vanosvika miriyoni imwe muEngland neWales. VaMark Zuckerberg-vakatungamira vezvenhau hofori
Kana iwe uri sangano hombe, pane zvinowanzoitika zvitanhatu zvakakosha zvebhizimusi software zvaunogara uchida: Akaundi Hierarchies - pamwe chinonyanya kukumbirwa pane chero bhizinesi chikuva kugona kuvaka maakaunzi eakaunzi mukati memhinduro. Nekudaro, kambani yemubereki inogona kushambadzira yakamirira brand kana franchise iri pasi pavo, kuwana yavo data, kubatsira mukutumira uye kugadzirisa akawanda maakaundi, uye kudzora kuwana. Maitiro Ekubvumidza - emabhizinesi masangano anowanzo ave nawo
Saizi ine basa kuti toda kuibvuma here kana kwete. Kunyangwe ini ndisiri iye anonyanya kufarira fanika yemazhinji ma network aya, sezvo ini ndichiona kusangana kwangu - mapuratifomu akakurisa ndiko kwandinoshandisa nguva yangu yakawanda. Kuzivikanwa kunotyaira kutora chikamu, uye pandinenge ndichida kusvika pasocial network yangu ndiyo mapuratifomu anozivikanwa kwandinogona kusvika kwavari. Cherekedza kuti ndati ndiripo. Ini handimbofa ndakaraira mutengi kana munhu kuti asiyane neiyo
China, Kukadzi 25, 2021 Mugovera, Kukadzi 27, 2021 Douglas Karr
Ini ndinotanga sei pasocial media? Uyu ndiwo mubvunzo wandinoramba ndichiwana kana ndichitaura pamhedzisiro yemagariro enhau pane bhizinesi 'kushambadzira. Kutanga, ngatikurukurei kuti sei kambani yako ingade kuve inoshingairira pasocial media. Zvikonzero Nei Mabhizinesi Achishandisa Yemagariro Media Kushambadzira Heino huru yekutsanangura vhidhiyo munzira 7 nzira iyo yako yemagariro midhiya kushambadzira inogona kutyaira bhizinesi mhedzisiro. Ungatanga Sei NeSocial
Muvhuro, Kukadzi 22, 2021 Chipiri, February 23, 2021 Douglas Karr
Kana ndambova nemufaro wekusangana newe pachiso, ndine chivimbo chekuti iwe ungandiwana ndiri munhu, anoseka, uye ane tsitsi. Kana ndisina kumbosangana newe iwe pachako, zvakadaro, ndinotya zvaunogona kufunga nezvangu zvichibva pahupenyu hwangu hwemagariro. Ndiri munhu ane shungu. Ndine shungu nebasa rangu, mhuri yangu, shamwari dzangu, kutenda kwangu, uye zvematongerwo enyika. Ini ndinonyatsoda nhaurirano pane chero ipi yenyaya misoro… saka kana vezvenhau
Crowdfire: Tsvaga, Curate, Govana, uye Shambadzira Yako Zvemukati Zvemagariro Midhiya
China, Kukadzi 18, 2021 China, Kukadzi 18, 2021 Douglas Karr
Rimwe rematambudziko makuru ekuchengetedza nekukudziridza kambani yako yemagariro midhiya ndeyekupa zvemukati zvinopa kukosha kune vateveri vako. Imwe yemagariro enhau manejimendi manejimendi inomira kunze kune vavakwikwidzi veiyi yeCroupfire. Kwete chete kuti iwe unogona kubata akawanda emagariro enhau maakaunzi, kuongorora mukurumbira wako, kuronga uye kugadzirisa ako ega kushambadzira… Crowdfire zvakare ine curation injini uko iwe kwaunogona kuwana zvemukati izvo zvinozivikanwa pasocial media uye iri
SEOReseller: White Label SEO Platform, Kuzivisa, uye masevhisi emaAgency
Svondo, Kukadzi 14, 2021 Svondo, Kukadzi 14, 2021 Douglas Karr
Nepo mazhinji emadhijitari ekushambadzira anomiririra chete pamhando, dhizaini, uye ruzivo rwevatengi, dzimwe nguva dzinoshaikwa mukutsvagisa injini (SEO). Izvo hazvireve kuti ivo havagone kubudirira kune vatengi vavo - ivo vanowanzove vari. Asi zvinoreva kuti kudzoka kwavo hakuwanzo kusangana nemukana wakazara wekuwana bhizinesi idzva. Kutsvaga kwakasiyana nechero imwe nzira nekuti mushandisi ari kuratidza chaizvo chinangwa chekutenga. Zvimwe kushambadza uye zvemagariro